उसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालोलाई पनि २० मिनेटमा गोरो बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस – भिडियो हेर्नुहोस। – Namaste Host
March 5, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on उसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालोलाई पनि २० मिनेटमा गोरो बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस – भिडियो हेर्नुहोस।
१२.छालामा तुरुन्त स्फुर्ती ल्याउनका लागि कागतीको रस बराबर मात्रामा पानी हालेर त्यसलाई ट्रेमा जमाइदिनुस् । यो आइस क्युबलाई अनुहारमा दल्नुस्। चिल्लोपना नियन्त्रणमा आउँछ। १३.चिल्लो छाला भएका व्यक्तिहरूले कागतीको रस र त्यसको बोक्रालाई अनुहारमा दल्नाले फाइदा हुन्छ। १४.शीघ्र छालाको सफाइका लागि अंगुरको अर्धरस निकालेर बाँकी गुदी आफ्नो अनुहारमा रगड्नुस्। अंगुर अम्लीय हुन्छ, अतः रुखो र चिल्लो छालालाई समान रूपले पोषण र सफाइ गर्छ।-एजेन्सी भिडियो हेर्नुहोस्
३ जना युवक रातभरी बसेर विहान सम्झनालाई संगै लागेका थिए भनिएको सबै कुरा झुटो, यस्तो रहेछ भित्रि यथार्थ (भिडियो हेर्नुस्)